शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : २७
‘समय नै छैन, कतिखेर लभ गरौँ !’
युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय छन्– अभिनेता पल शाह । म्युजिक भिडियोमा निकै रुचाइएका उनी पछिल्लो समय फिल्ममा पनि सक्रिय हुँदैछन् । ‘नाई नभन्नु ल–४’बाट फिल्ममा डेब्यु गरेका उनले ‘म यस्तो गीत गाउँछुु’को सफलताको स्वाद चाखेको दुई महिना नबित्दै ‘जोनी जेन्टलम्यान’ प्रदर्शनमा आएको छ ।
‘तलबभन्दा बढी पाएको त्यो टिप्स...’
लोकदोहोरी गायनमा लोकप्रिय नाम हो– रामजी खाँड । उनले हालसम्म करिब सात हजार लोकदोहोरी गीत गाइसकेका छन्, १ सयजति म्युजिक भिडियोमा अभिनय पनि गरेका छन् । उनी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
‘मैले खत्रा एक्टिङ गर्न थिएटर गरेको हैन’
नम्रता श्रेष्ठ एउटी कुशल अभिनेत्री हुन् । बाल कलाकार हुँदै म्युजिक भिडियोकी प्रख्यात मोडलबाट चलचित्रमा पदार्पण गरेकी उनले यतिबेला ‘गोल्डेन ब्वाई’ नामक अंग्रेजी नाटकमा अभिनय गरेकी छन् । उनको यो नाटकको चर्चा अंग्रेजी मिडियामा निकै भयो ।
‘मलाई भइरल हुनु छैन’
पहिलेकी हिरोइन झरना थापा यतिबेला निर्देशकका रुपमा झुल्किएकी छन् । शुक्रबारबाट प्रदर्शन हुने फिल्म ‘ए मेरो हजूर २’बाट उनको परिचयमा हिरोइनसँगै निर्देशक पनि थपिएको हो । पहिलो फिल्म निर्देशनका गाह्रा–अप्ठेरासँगै पछिल्लो समय आएका मिडिया ‘क्रान्ति’बारे उनले पुष्पा थपलियासँग खुलेरै कुरा गरिन् ।
हिट हुन कसलाई मन लाग्दैन र ?
नेपाली गायन क्षेत्रमा चम्कदै गरेको नाम हो– टीका प्रसाईं । ‘सेल्फीको जमाना’ गीतकी गायिका टीकाको ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ गीत निकै हिट छ । १५ वर्षअघिदेखि संगीतमा संघर्षरत टीकाले करिब आठ वर्ष गजल साँझतिर पनि गाइन् ।
अजिंगरको आहारा दैवले जुराइहाल्छ नि !
हास्यकलाकार मनोज गजुरेल यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गरेर चर्चामा छन् । उनले यस पटकको गाइजात्रे प्रहसनमा ट्रम्पको नक्कल गरेका हुन् । उनले यसअघि थुप्रै नेपाली राजनीतिज्ञको नक्कल गरिसकेका छन् ।
हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा चर्चित नाम हो– राजाराम पौड्याल । दुई दशकअघि महजोडीको ‘१५ गते’ सिरियलबाटै लोकप्रियता कमाएका राजाराम विभिन्न चलचित्रका हास्य चरित्रबाट चर्चामा आए । सात वर्ष अमेरिकामा बरालिए पनि नेपाल फर्किएलगत्तै टेलिभिजनको हास्य शृंखला ‘जिरे खुर्सानी’ले पुरानै ख्याति फर्काइदियो ।
‘विकृति रोक्न निरन्तर व्यंग्य गर्नुपर्छ’
गाईजात्रा भन्नेबित्तिकै गाईजात्रा नै सम्झन्छु । किनभने घरमा कोही मानिस बित्दा गाई निकाल्नुपर्छ । मेरी साइँली आमा बित्नुभएको थियो र म गाई बनेको थिएँ । त्यही याद आउँछ । त्यस समयमा म जुँगा बनाएर गएको थिएँ ।
‘हामीले त जितको रमाइलो पनि मनाउन पाएनौँ’
यतिबेला मिस नेपाल नीतिका चाण्डकलाई सायदै परिचय चाहिएला । व्यस्त समयमा अन्य तीन विजेता साथीहरु मिस अर्थ नेपाल रोजिना श्रेष्ठ, मिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाह र मिस एसिया प्यासिफिक नेपाल सहारा बस्नेतसँगै शुक्रबार कार्यालय आइपुगेकी नीतिकासँग गरेको रोचक कुराकानी।
‘इमोसन नै मेरो हतियार’
नेपाली फिल्मका चल्तीका निर्देशकमध्ये पर्छन्– सुदर्शन थापा । उनी सुरुमा कलाकार थिए, पछि निर्देशक भए । १० वर्षअघि टेलिसिरियल ‘दलन’मा उनले अभिनय गरेको ‘मानव’को भूमिका अझै पनि दर्शकले बिर्सेका छैनन् ।
नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा परिचित नाम हो– सिपोरा गुरुङ । उनी राष्ट्रियस्तरकी भलिबल खेलाडी हुन् । नेपालका तर्फबाट सबैभन्दा कम उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिएर पदक जित्ने खेलाडीमा पर्छिन् उनी । श्रीलंकामा सम्पन्न दसौं साग खेलकुदमा उनले नेपालका लागि कास्यपदक जितेकी थिइन् ।
‘हार्नु के हो, अनुभव गर्दैछु’
अहिले चर्चामा रहेको गायनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘नेपाल आइडल’को उत्कृष्ट १८ मा पुगेर बाहिरिएका गायक हुन्– प्रताप लामा । उनी नेपालको चर्चित रियालिटी सो ‘नेपाली तारा’को विजेता थिए ।
‘हाम्रो श्रमको सम्मान कहिले हुन्छ ?’
रामचन्द्र अधिकारी फिल्म उद्योगमा देखापरेकै साढे तीन दसक कटिसकेको छ । उनी अझै कलाकारितामा सक्रिय छन् । उनको व्यस्तता कम भएको छैन र होस् भन्ने पनि चाहना छैन । गएको साता उनी ‘शुक्रबार’ कार्यालय आइपुग्दा नातिसमेत ल्याएका थिए, भने, ‘भर्खरै एसइईमा ‘ए’ श्रेणीमा पास भयो, कलेजमा भर्ती गराउन लिएर हिँडेको !’
क्षणिक हाइफाइले जिन्दगी चल्दैन
अरुणा कार्की अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । २०६२ सालदेखि व्यावसायिक अभिनय यात्रा सुरु गरेकी कार्की ‘साँघुरो’, ‘कबड्डी’, ‘कबड्डी–कबड्डी’, ‘छक्कापञ्जा’जस्ता हिट फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
‘मिडिया बढी चाकडी खोज्छ’
गिरीश खतिवडा नेपालका लोकप्रिय र्यापर हुन् । उनलाई नेपाली र्याप संगीतको प्रणेता पनि मानिन्छ । उनको पहिलो र्याप गीत ‘मिनिङलेस र्याप’ सन् १९९२ मा निस्किएको थियो । त्यतिबेला उनी कक्षा–८ मा पढ्थे ।
‘फेसन इन्डष्ट्रीमा पुरुषहरू दबिएका छन्’
अनुपबिक्रम शाही म्युजिक भिडियो, फेसन शो हुँदै फिल्ममा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् । फिल्म ‘हँसिया’मा उनले निर्वाह गरेको खलपात्रको भूमिका पुरस्कृत भएको थियो । उनी नेपाली फिल्ममा ‘ह्यान्डसम भिलेन’का रूपमा चिनिँदै आएका थिएँ ।
‘हनुमानको पछि लाग्दा सिरियल खेल्न पाइयो’
अभिनेत्री रजनी गुरुङले गुरुङ भाषाको फिल्म ‘धिँ’बाट अभिनय सुरु गरेकी हुन् । तर हाँस्य श्रृंखला ‘मेरी बास्सै’मा बुद्धि तामाङ ‘हैट’की श्रीमती ‘मंगली’ बनेर खेल्न थालेपछि भने उनी धेरैको नजरमा परिन् ।
‘गीत हिट, फिल्म फ्लप हुँदा नमीठो लाग्छ’
कोरियोग्राफर रेनशा बान्तवा राईले १० वर्षअघि ‘मेरो एउटा साथी छ’ फिल्मबाट काम थालेकी हुन् । पहिलो फिल्मबाटै उनले उत्कृष्ट कोरियोग्राफरको नेसनल अवार्ड पाइन् ।
‘आफ्नो त घरभरि गायक छन्’
कोसिस क्षत्री खासमा आफूलाई गायक भनेर चिनाउँछन् । तर, उनका अन्य परिचय पनि छन् । उनी संगीतकार, एरेन्जर, अभिनेता, मोडल पनि हुन् । फिल्म ‘मोक्ष’मा गरेको अभिनयका कारण ...
‘एक जनाको मायाले मात्र जिन्दगी कट्दैन’
तीन वर्षअघि फिल्म ‘नोभेम्बर रेन’बाट फिल्ममा डेब्यू गरेकी हुन्,छुल्ठिम गुरुङले । यो फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको चरित्र ‘डल्ली’लाई धेरैले रुचाएका थिएँ । तैपनि, उनले फिल्म नै नखेल्ने मनस्थिति बनाइसकेकी थिइन् ।